बाढीले मेलम्ची आयोजना क्षतविक्षत : किन भएन पुनर्निर्माण ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
बाढीले मेलम्ची आयोजना क्षतविक्षत : किन भएन पुनर्निर्माण ?
१७ श्रावण, २०७८ ०९:१४ मा प्रकाशित
काठमाडौं – मेलम्ची नदीमा असार १ गते आएको बाढीले आयोजनालाई क्षतविक्षत बनाएको छ। वर्षायाममा खोलामा बाढी आउनु स्वाभाविक हो। तापनि, यत्रो ठूलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दा ‘सम्भावित जोखिम’ तर्फ ध्यान नपुगेको यसले देखाउँछ। मेलम्चीको पानी आफ्नै घरको धारामा झर्दा राजधानीवासीले पानीको दुःख अन्त्य भएको महसुस गरे। तर, त्यो खुसी धेरै दिन टिकेन।
प्रवेशमार्गमा ५ वटा पुल रहेकोमा रातो पुलबाहेक सबै बगाएको छ। साथै, हेलम्बुको मेलम्ची खानेपानीको सिरमा रहेको नाकोतेको पुल लगायत तिम्बुपुल, फट्टेपुल, मेलम्चीपुल बाढीले बगाएको छ। बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। आयोजना स्थलसम्म जान सक्ने अवस्था नभएकाले खर्च गर्नुपर्ने बजेट पनि अनुमानित नै हो। एसियाली विकास बैंकको मुख्य ऋणमा नेपाल सरकारको समेत लगानीमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको थियो। क्षतिपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पत्राचार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। झण्डै २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौंमा ल्याइएको थियो।
यसै वर्षको माघसम्म वैकल्पिक वितरण प्रणालीअन्तर्गत मेलम्चीको पानी काठमाडौंका जनतालाई पुर्‍याइने पन्त बताउँछन्। तर, मुख्य संरचनास्थल, मुख्य सुरुङमार्गमा ठूलो क्षति भएको अवस्थामा भने पानी वितरणको प्रक्रिया पछि धकेलिनेछ। आयोजनाको सुरुका अध्ययनले नै यसलाई अत्यन्तै समस्याग्रस्त स्थानका रूपमा देखाएको भूगर्भविद् डा. रञ्जनकुमार दाहाल बताउँछन्।